VAKY BANTSILANA : Vahaolana tsy mahomby sady tsy maharitra… | NewsMada
Mihamahery vaika hatrany ny delestazy eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Mihoatra lavitra noho izany aza, ny any amin’ny faritra. Tsy misy tsy mikaikaika ny maro manoloana ny tolotra omen’ity orinasam-panjakana efa mitsipozipozy ity. Voalaza ombieny ombieny fa orinasa stratejika eo am-pelatanan’ny fanjakana izy io, ary ahina tanteraka ho lasan’ny vahiny. Sao tetika iray hampisehoana izao fa tsy mahavita azy intsony ny fanjakana, ho lasan’ny vahiny mora foana avy eo. Ny hamisavisana ny ratsy, hoy ny Ntaolo, iavian’ny soa. Efa manomboka mampitroatra ny mpianatra sy ny vahoaka ny zava-miseho, raha tsy hiresaka afa-tsy ny teny Anosimasina Itaosy sy ny eny Vontovorona…
Hampivonto orona ny rehetra ny zava-misy satria marobe ny asa no miankina amin’ny herinaratra. Fatiantoka tsy hita noanoa no aterak’izao zava-mitranga amin’ny resaka delestazy lavareny tsy ahitam-bahaolana mahomby sady maharitra ity. Raha vao mihetsika manatanteraka ny tsy fankasitrahana ny vahoaka. Mampiasa hery ny fanjakana amin’ny alalan’ireo herim-pamoretana. Mahery vaika ny valin’ny fitakiana, satria mampiasa bala fingotra sy baomba mandatsa-dranomaso ireo herim-pamoretana, hamonoana afo ny fihetsiketsehana. Tsy hita izay tena imasoan’ny mpitondra amin’izao olana ara-tsosialy izao. Mondry mifandromba-boasary, ny raharaha, mitana ihany fa ny azo mikodia. Ireo heverina ho tompanandraiki-panjakana aza, mitsaha-ketriketrika tahaka ny sosoa voatapo-drano. Nilaza, ohatra, ny minisitra iray afakomaly, fa efa an-dalana ny famahana ny olana. Hanantena inona amin’izany ny vahoaka sa hanahy tena amin’ny tsy fahitam-bahaolana matotra izy ireo?
Mbola fatra-piolika toa tsinain’ondry amin’izao olana ara-tsosialin’ny vahoaka izao indray ve ny mpitondra ? Azo eritreretina ho seriny amin’ny fametrahana ny Fitsarana avo ahafaha-mitsara ireo mpitondra sy olona ambony angamba no mahavariana azy ireo. Izay no mety hanadinoan’ny tompom-pahefana izao fahoriam-bahoaka izao. Ny vahoaka sanatria, tsy midongidongy mihaitraitra fangataka, ka mitomany sofim-bahiny hatono fa zavatra tsotra no katsahiny sy andrasany amin’ireo manam-pahefana, ny fanalana azy ao anatin’izao fahantrana lalina sy mangitsokitsoka izao. Mandra-pahoviana no iaretan’ny vahoaka izao olana ara-tsosialy izao? Tongotr’ondry nahafahan-koditra ny valalabemandry, ka haringaringan-taolana no sisa…
Ho taolana ho an’ny vahoaka hatrany ny tsy fahitan’ny mpitondra vahaolana mahomby sady maharitra. Anisan’izany ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisiana fitiavan-tanindrazana marina, raha tsy hiresaka afa-tsy ny finiavana hiady ireo Nosy manodidina giazan’ny vahiny. Hiteraka olana maharitra hatrany ny fisian’ny kiantranoantrano, fanjakana ananan-kavana, ny lehibe tsy andrian-keloka tanterahin’ny mpitondra…Hisy farany avokoa izay natao fa ny hazo tsaraina amin’ny voany ary ny mpitondra tsaraina amin’ny zava-bita. Tsinjovy leiretsy ny farany ! Sao ataonao ho mora izany hoe “Ikoro” fa tsy ho ataon’ny vahoaka bozaka aman’ahitra no farany…